भद्रगोलमा कसरी प्रवेश गरिन् जिग्रि ब्रो की रक्षा ? जान्नुस् ,उनको सर्घषको कथा (१५ तस्विर) – MediaNP
काठमाडौँ । अहिले भद्रगोलमा अभिनय गर्ने रक्षाले सिरियल आउनुभन्दा अघि दुई दर्जनभन्दा बढी विज्ञापन तथा थुप्रै म्युजिक भिडियोमा काम गरिसकेकी थिइन् । तर अहिले हास्य टेलिशृंखला भद्रगोलमा आवद्ध छिन् । उनको भद्रगोलमा प्रवेश भएपछि नाम मात्र फेरिएको छैन् ,चर्चाले पनि शिखर नै चुमेको छ । किनभने अहिले भद्रगोल यट्युब च्यानलमा पनि निरन्तर ट्रेन्डिङमा पर्न थालेको छ ।
त्यसैले उनी आफैले भद्रगोलको नयाँ एपिसोड ट्रेन्डिङ नं. १ मा रहन सफल भएकाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत खुसी हुदैँ शुभचिन्तक तथा फ्यानलाई धन्यवाद समेत दिएकी छन् । उनी भद्रगोलमा जिग्रीको गलफ्रेण्डको भूमिकामा देखिने गर्छिन् ।
अहिले उनी भद्रगोलमा मात्र नभएर ठुला पर्दाका चलचित्रमा पनि अभियन गर्न थालेकी छन् ।साथै म्युजिक भिडियो र विज्ञापनको समय समयमा चर्चामा चलिइरहन्छ । एक अन्तवार्तामा उनले आफुलाई ठुलो पर्दाको चलचित्रमा अफर आएपनि रुची सिरियलमै भएको बताएकी छिन् ।
कसरी प्रवेश गरिन् भद्रगोलमा ?
भद्रगोल सिररियल सुरुवात भएको केही समयपछि भद्रगोल टिमले एक महिला कलाकारको खोजी गरिरहेको थियो । यसैबीच रक्षालाई सिटी सेन्टरमा भएको एक कार्यक्रममा लागी प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसपछि उनी कार्यक्रममा गइन् । जहाँ उनले भद्रगोलको कन्सेप्ड राम्रो लागेपछि भद्रगोलमा प्रवेश गरेकी थिइन् ।
भद्रगोल नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक शुक्रबार साँझ प्रसारण हुँदै आएको छ । जसको मिडिया हबको प्रस्तुतिमा अर्जुन घिमिरे र कुमार कट्टेलको लेखन तथा निर्देशन गर्दछन् ।